Maxaabiis si cajiib ah uga baxsaday Xabsi oo dadka laga codsaday inay raadiyaan – XOGMAAL.COM
Maxaabiis si cajiib ah uga baxsaday Xabsi oo dadka laga codsaday inay raadiyaan
Zhang Guilin (Bidix) iyo Wang Lei (Midig) ayaa ka baxsaday xabsi ku yaalla waqooyi-bari gobolka Liaoning
By Soomaaliya	 Last updated Oct 6, 2018
Dalka Shiinaha, baxsashada xabsiga aad ayay ugu yar tahay waqtiyo kala fog ayaana u dhaxeeya. Sidaas darteed kiiska labo nin oo ka baxsaday xabsiga Liaoning ayaa isku beddelay dhacdo dalkaasi laga hadal hayo.
Warbaahinta Shiinaha ayaa qaadday tallaabo aan caadi ahayn oo ay bulshada dalkaasi uga codsanayaan inay baadi-goobaan raggaas baxsaday, waxay xitaa shaaciyeen abaalmarin la siinayo ceddii ka keenta warbixin horseedda qabashada labadaas qof ee baxsaday, taas oo gaareysa 100,000 yuan-ta Shiinaha, una dhiganta (£11,185, $14,558).
Labada nin, oo weli la rumeysan yahay inay ku sugan yihiin waqooyi-bari gobolka Liaoning, ayaa ku xukunnaa xabsi daa`in.
Waa wax aan caadi ahayn in maxbuus uu ka baxsado xabsi ku yaalla Shiinaha, sidoo kalena loogama baran inay warbaahintu tebiyaan wararkaas oo kale.
Warbaahinta Shiinaha ayaa sida caadiga ah ka fogaada baahinta dhacdooyinka soo jeedinaya dareenka bulshada, waxayna tebiyaan marka dhacdada la xalliyo ee wax laga qabto.
Waa kuwama ragga baxsaday?
Labada maxbuus ayaa kala ah Wang Lei oo 33 sano jir ah iyo Zhang Guilin oo 39 jir ah. Waxaa markii ay baxsanayeen lagu hayay Xabsiga Saddexaad ee Lingyuan oo ku yaalla waqooyi-bari xabsiga Liaoning.
Wax yar un baa laga yaaqaannaa Wang Lei, oo dil lagu xukumay isagoo afduub lagu eedeeyay sanadkii 2017. Wararka ayaa sheegaya in xukunkiisa dib loo dhigay muddo labo sano ah, dhammaadka sanadkii horena waxaa laga qafiifiyay xukunka isagoo xabsi daa`in lagu xukumay dhaqankiisa oo wanaagsanaaday dartiis.
Sidoo kale 39-jirka Zhang Guilin, ayaa xabsi daa`in lagu xukumay isagoo loo haysto inuu dhac geystay. Waxaa sanadkii 2001 lagu xukumay toddobo sano oo xarig ah, balse waxaa dib loo xiray sanadkii 2008, sanad kaddib markii xabsiga laga sii daayay.
Sanadkii 2009 ayaa xabsi daa`in lagu xukumay, balse waxaa la sheegay in intii uu xirnaa uu labo jeer isku dayay inuu baxsado. Waxaa lagu yaqaannaa nin rabshad badan, wuxuuna si kas ah u dhaawacay maxbuus isagoo dhaawacyo yar ka gaarsiiyay wejiga kaddib markii uu dagaal dhex maray.
Sidee ayay ugu suurto gashay inay baxsadaan?
Waxaa jira warar is khilaafsan oo ku aaddan sidii ay raggaasi ugu suurto gashay inay baxsadaan.
Bogga Beijing Youth Daily ayaa baahiyay in maxaabiista ay baxsadeen iyagoo xiran dhar isku ek oo ay ka xadeen waardiyeyaasha xabsiga isla markaana ay isticmaaleen kaararka xabsiga ee ilaaladaasi.
Si kastaba, raadiyaha dalkaasi ee China National Radio ayaa shaaciyay in faahfaahin dhab ah aan laga heyn baxsashada raggaas, isagoo intaa ku daray in laga yaabo inay ka baxeen daaqadda xabsiga.
Maaddaama ay labada nin xabsi daa`in ku xukunnaayeen, waxaa la qiyaasayaa in ammaanka xabsiga uu aad u sarreeyay. Waxaa la sheegay in xabsiga uu sameeyo dhaqan-celin uuna maxaabiista fursad u siiyo inay soo saaraan dhar.
Dhacdadan ayaa buuq ka abuurtay baraha bulshada ee Shiinaha, iyadoo eedeymo loo soo jeediyay maamulka xabsiga.
Dad badan ayaa la yaab ka muujiyay in ragga baxsaday aan weli la soo qaban, iyadoo Shiinhuhu uu leeyahay booliis heegan ah.
Dhacdadan ayaa loo aaneyn karaa inay suurto gashay sababo la xiira Toddobaadka Dahabiga ah – oo ah toddobaad fasax ka ah Shiinaha.
Xilligaanna waxaa badan isku socodka dadka guud ahaan dalkaas, waana suurto gal in dhacdooyinkaas oo kale ay dhacaan.
Kumannaan qof oo baraha bulshada dalkaas isticmaala ayaa sheegaya in shaqaalaha xabsigaasi ay yihiin kuwo aan waajibkooda gudan waxay ku eedeeyeen dayacaad. Kuwo kale ayaa u baqay ammaankooda, kaddib markii ay ogaadeen sida uu u daran yahay xukunka raggaasi baxsaday.
Maxay warbaahintu leedahay?
Warbaahinta dalkaas ayaa aalaaba tebisa dhacdooyinka kaddib marka wax laga qabto. Kiisaska la xiriira weerarrada toorreyda la isku adeegsado, waxay keliya warbaahintu sheegtaa kaddib marka eedeysanaha la xiro.
Raadiyaha China National Radio ayaa sheegay inay u ektahay in raggaasi aysan weli ka tegin gobolka. Beijing Youth Daily ayaa sidoo kale beeninaya wararka sheegaya in mid ka mid ah raggaas uu khatar yahay, isagoo sheegay in labadoodaba ay aqoontoodu hooseyso.
Wuxuu boggu intaas ku daray in Wang uu keliya dhammeystay waxbarshada dugsiga sare, halka Zhang uusan weligii iskuul tegin.
Ma waxaa jiray baxsasho hore uga dhacday xabsiyo kale oo aan wax ka ognahay?
Saddex maxbuus ayaa dilay sarkaal booliis waxayna ka baxsadeen xabsi aad loo ilaaliyo bishii September 2014
Waxaa jiray dhacdooyin isku mid ah oo dhacay bishii September 2014, markii saddex maxbuus ay ka baxsadeen xabsi ammaankiisu uu aad u sarreeyo oo ku yaalla waqooyi-bari magaalada Harbin.
Ragga baxsaday, Gao Yulun, Wang Damin iyo Li Haiwei, ayaa baxsaday kaddib markii ay dileen waardiye, waxayna awoodeen inay xabsiga ka baxaan iyagoo xiran dhar uniform ah oo ay xadeen.
Si la mid ah dhacdadan, wax yar un baa laga ogaa sidii ay ugu suurto gashay inay u baxsadaan iyagoo aan la qavab. Toddobaad kaddib ayaa raggaas dib loo soo xiray.
Weeraro halis ayay la kulmaan Shaqaalaha Gargaarka ee Soomaaliya.
Akhriso Soomaaliya oo Dowladda Qatar u fasaxday Dhoofinta Duurjoogta.